Discovery | Danya Wadi
The world’s deepest ocean blue hole：Sansha Yongle Blue Hole
By danyawadi July 26, 2016 Leaveacomment
Chinese researchers have confirmed that the world’s deepest underwater sinkhole, or blue hole, is located at China’s Xisha Islands in the #SouthChinaSea. The blue hole is located at 16.31 degrees north latitude and 111.46 degrees east longitude in Yongle,amajor coral reef in the Xisha Islands. The latest exploration project found the hole is […]
Amazing Tree House in Philippines! ဖိလစ်​ပိုင်​ငံရှိ သစ်​ပင်​​ပေါ်က အိမ်​က​လေး
By danyawadi April 9, 2016 Leaveacomment
သစ်ပင်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပါတယ်။ Amazing Tree House in Philippines!
ဘာမြူ ဒါတြိဂံရဲ့ဗဟို ရေအောက်မှာ ပိရမစ် ၂ ခု ​တွေ့ရှိ ရတဲ့ သတင်း
နာမည်ကြီးဘာမြူ ဒါတြိဂံရဲ့ဗဟို ရေအောက်မှာ ပိရမစ် ၂ ခု ​တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ Dr.Ray Brownရဲ့သုံးသပ်ချ က်ပါပူးတွဲ တင်ပေးထား ပါတယ်။ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ။ #Crd
အချိန်မတန်ပဲ အိုနေကြ ရတဲ့ ကလေးနှစ်ဦး
By danyawadi February 3, 2016 Leaveacomment
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်နဲ့ တစ်နှစ်ခွဲအရွယ် သားငယ်လေး တစ်ဦးတို့ဟာ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်း ရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ ယင်း ရောဂါဟာ Cutis Laxa လို့အမည်ရပြီး အခြား အရွယ်မတိုင်ခင် အိုတဲ့ ရောဂါဝေဒနာသည်များနဲ့လည်း သိပ်မတူပါဘူး။ Cutis Laxa ကို ခံစားရမိတဲ့ ယင်း ကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့ အသားအရေဟာ တွန့်တွဲကျသွားပြီး ယင်းတွန့်တဲ့အစိတ် အပိုင်းနေရာများမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချိုး၊ အကောက် နေရာတွေ မှာလည်း ကိုက်ခဲဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ ယင်းကလွဲလို့ အခြား ရောဂါဝေဒနာ မရှိပါဘူး။ အသက် ၄၀ အရွယ်နဲ့ ၃၅ နှစ်အရွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့မှ မွေးဖွားလာခြင်း […]
ကမ္ဘာထက် ဆယ်ဆကြီးမား သည့် ၉ လုံးမြောက်ဂြိုဟ် ထပ်တွေ
ကမ္ဘာထက် ဆယ်ဆကြီးမားသည့် ၉ လုံးမြောက်ဂြိုဟ် ထပ်တွေ့ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များပြော အမည်မသိသေးတဲ့ ၉ လုံးမြောက် ဂြိုဟ်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကြေညာပါတယ်။ နိုင်း ပလန်းနက် (ဂြိုဟ် ၉) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာထက် ၁၀ ဆ ကြီးမားသလို ပလူတိုရဲ့ ထုထည်ထက် အဆ ၅၀၀၀ ကြီးတယ်လို့လည်း ကယ်လီဖိုးနီးယား နည်းပညာ အင်စတီကျု သုတေသီတွေက ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီဂြိုဟ်ဟာ နေကို တပတ်ပတ်ဖို့အတွက် နှစ် ၁ သောင်းကနေ ၂ သောင်းအကြား ကြာမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ဂျာနယ်မှာ ထုတ်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သချာင်္နည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ […]
ထူးဆန်းသောသတ္တ၀ါ Pangolin ခေါ် သင်းခွေချပ်
CNN မှာ လာသွားတယ်။တရားမဝင် ကုန်ကူး ခံရဆုံး Pangolin ခေါ် သင်းခွေချပ်။ တရုတ် ပြည်က အဝယ်ဆုံး မျိုး တုန်းတော့ မယ့်။ မြန်မာ မျိုးရင်း သတ္တဝါ
By danyawadi January 13, 2016 Leaveacomment
သြစတေးလျနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Queensland ပြည်နယ် ရှိ River Heads လို့ အမည်ရတဲ့ မြို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတေးလျမှာ သားပိုက် ကောင်ဟာ အများဆုံး ပေါက်ဖွားပြီး ယင်း ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသမှာလည်း နေထိုင် ကျက်စားမှုများ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မြို့ပေါ် တက်လာတတ်ပြီး ယခုလို လမ်းတွေပေါ်၊ ပန်းခြံတွေမှာ မြင်တွေ့ရ တတ်ပါတယ်။ ယခုပုံမှာ မြင်တွေ့ရတာကတော့ ကွယ်လွန်သူ သားပိုက်ကောင်အမကို ခင်ပွန်းသားပိုက်ကောင်မှ ထွေးပွေ့ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သားပိုက်ကောင် အမဟာ လမ်းပျောက်သွားတဲ့ သားပိုက်ကောင် ငယ်လေး (သားလေး) ကို ရှာဖွေရင်း ပန်းခြံမှာ လဲကျသေဆုံးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သားပိုက်ကောင် ကလေးငယ်လေးကတော့ ဘာမှ […]
Body Art: ခန္ဓာကိုယ်​​ပေါ်က ပန်းချီ ပုံများ
By danyawadi December 4, 2015 Leaveacomment
​ ​လောကမှာ ထူးဆန်းသည်​ထက်​ ထူးဆန်း​အောင်​ လုပ်​ပြ​နေတာ ခန္ဓာကိုယ်​​ပေါ်က ပန်းချီက သက်​သေခံ​နေ တယ်​။
သြစ​တြေလျမှာတိုက်​တဲ့​လေ​ပွေ မုန်​တိုင်း တစ်​ခု
By danyawadi December 3, 2015 Leaveacomment
http://burmese.dvb.no/archives/125214 သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က လေပွေတိုက်ခတ်ခဲ့တာကို ခရီးသွားတဦးက ရုပ်သံဗွီဒီယိုနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ဆူဆန်မေးလ် အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးက ကားပေါ်ကနေ တွေ့ရှိ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ဟစ်ဂင် မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအုပ်စု ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ” ပေါ်ကို တင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူပီအိုင်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ လမ်းမတလျှောက် မွှေ့တိုက်သွားတဲ့ လေပွေကို ကားနဲ့ နောက်ကလိုက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပါ့ခ်စ်မြို့ “ခြသေ့င်္များဥယျာဉ်” အနီးက လမ်းပေါ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဆူဆန်မေးလ်က “ကျမ မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့်သူတယောက် ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ထင်တယ်ရှင့်။ ဒါဟာ တော်တော်ကြီးကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်” လို့ အဲဒီ ဗွီဒီယိုဖိုင် အညွှန်းမှာ ရေးခဲ့တာပါ။ ရုပ်သံ – ယူပီအိုင်
Walking onaslackline that’s 840 meters above sea level : ​ကြောက်​စရာ အမြင့်​​ပေမှ လမ်း​လျှောက်​ ခြင်း
By danyawadi November 18, 2015 Leaveacomment
Walking onaslackline that’s 840 meters above sea level is obviously not terrifying enough for her! She needs some high-heels to get even higher! Faith Dickey from the US